आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! – Namaste Host
March 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो !
फेसबुके प्रेमीसँग रो’मान्स गर्ने सपना देखेका केटाले छिटो आउन क’र गरिरहे। एक दिन केटी नेपालगञ्जबाट हिडेको बताइन् । उनले च’न्द्रौटामा पुगेपछि पैसा, गहना,
मोबाइल चो’री भएको र आफू अ’प’ह’र’ण’मा परेको बताइन्। प्रहरीलाई फोन गरिन्, ‘म शौ’चालयमा छु । चार जनाले मलाई अ’प’ह’र’ण गरेका छन् । अर्को ठाउँमा लै’जाने कुरा गर्दैछन् । मलाई उ’द्दार गर्नु पर्यो।’
ब’र्दियाबाट नेपालगञ्ज आएर बसेकी ३३ वर्षकी आ’शिक कुमारी चौधरीले यो सब ना’टक गरेकी थिइन् । प्रहरीले के’रकार गर्दा उनले केटाले भेट्न क’र गरेपछि आफूले ना’टक र’चेको बताएकी छन् ।
बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानाले आइतबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरेर घ’टना बाहिर ल्याएका हुन्। प्रहरीले झु’ठो मु’द्दा र गलत सू’चना प्र’वाह गरेको आ’रोपमा का’रबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।